Arsenal Oo Inkaartii Ka Haysatay Inay Ku Guulaysato Old Trafford Soo Gabagabaysay Iyo Danny Welbeck Oo Gunners U Sahalay Inay U Soo Baxdo Wareega Afar Dhamaadka FA Cupka | Ceerigaabo News
Arsenal Oo Inkaartii Ka Haysatay Inay Ku Guulaysato Old Trafford Soo Gabagabaysay Iyo Danny Welbeck Oo Gunners U Sahalay Inay U Soo Baxdo Wareega Afar Dhamaadka FA Cupka
Kooxda Arsenal ayaa u soo baxday wareega afar dhamaadka FA Cupka kadib markii ay guul Man United kaga soo gaadhay Old Trafford. Gunners ayaa guushan ku gadhay laba gool oo ay ukala dhaliyeen Nacho Monreal Iyo Danny Welbeck. Man United ayuu goolka udhaliyay Kabtankooxda Wayne Rooney.
Man united ayaa 14 kii daqiiqo ee ugu danbaysay ku dhamaysatay 10 ciyaartoy kadib markii kaadhka cas laga siiyay Di Maria. Arsenal ayaa soo gabagabaysay inkaartii ka haysatay Old Trafford halkaas oo aanay tan iyo sanadkii 2006 ku soo guulaysan.Danny Welbeck ayaa Old Traffrod ku soo laabtay si uu u dajiyo kooxdiisii hore ee Red Devils.
Manchester United ayaa Arsenal ku soo dhawaynaysay garoonkeeda Old Trafford kulan ka tirsanaa sideed dhamaadka FA Cupka. Taariikhda ay labadaan kooxood ku leeyihiin koobka ugu faca weyn kubada cagta adduunka ee FA Cupka ayaa ka xiiso badan u yeelaysay kulankan.
United iyo Arsenal oo 13 jeer oo hore iskaa horyimid FA Cup, ayaa markii 14 aad caawa kulmaya. Lix kulan oo ka mid ah 13 kii kulan ee ay hore iskaga horyimaadeen ayay Arsenal guulaysatay halka Man United oo caawa marti loo yahay ay soo guulaysatay 7 kulan. labadan kooxood ayaa sidoo kale FA Cupka ku guulaysatay min 11 jeer, waxayna hadda u dagaalamayaan kooxda u soo bixi doonta wareega afar dhamaadka FA Cupka.
Todobadii kulan ee ugu danbeeyay ee ay Man United iyo Arsenal iskaga horyimaadaan FA Cupka ayaa kulankasta casaan la bixiyay, waxayna koox kastaaba ka taxadaraysay in casaan laga siiyo ciyaarotydeeda iyada oo kulankani koox kastaba muhiim u ahaa.
Kulankan ayaa ah kulankii ugu horeeyay ee uu tababare Van Gaal kooxda Arsenal kula ciyaaro Old Trafford isaga oo kulanka kaliya ee uu ka hor yimid Wenger kaga soo guulaystay Emarites Stadium.
Arsenal oo aan garoonka Man United ku guulaysan tan iyo sanadkii 2006 ayaa doonaysay inay iska soo reebto inkaarta ka haysatay Old Traffrod. Gunners ayaa sideed kulan oo ay isku dayeen inay garoonka Man United ku soo guulaystaan aan wax guul ah ku gaadhin, waxaana wali maskax dooda ka sii dhex guuxaysa guuldaradii iyo xasuuqadii ay Man United ugu gaysatay bishii August 2011 markaas oo ay 8:2 ku burburisay Gunners.
Kulankan oo si aad ah loo sugaayay isla markaana xaalada garoonku ay ahayd mid khaas ah ayay Man United markiiba ku bilaabatay qaab ciyaareed deg deg ah balse Gunners ayaa dadaalkeeda u diiday inuu midho dhalo.Rooney, Young iyo Fellaini ayaana fursado fiican helay laakiin kooxdooda ugamay faa’iidayn.
Arsenal ayaa fursadeeda ugu horaysay samaysay daqiiqadii 21 aad markaas oo uu Oxlade-Chamberlain uu helay fursad fiican kadib markii uu Welbeck kubbad fiican siiyay laakiin Chamberlain ayaa kubbad xaga sare mariyay.
Daqiiqadii 26 aad ayuu jawiga ciyaartu is badalay kadib markii ay Arsenal hogaanka ciyaarta u qabatay, waxaana gool qurux badan udhaliyay difaaceeda Nacho Monreal kaas oo ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Arsenal hogaanka kula wareegtay.
Goolkan ayaa ku yimid shaqo layaableh oo ay qabteen Ozil iyo Oxlade-Chamberlain, Ozil ayaa si fiican kubbad ugu dhiibtay Oxlade-Chamberlain kaas oo difaaca Red Devils si fiican u seex seexiyay isla markaana si cajiib ah goolka kubbada ugu hor dhigay Nacho Monreal kaas oo aan wax qalad ah samayn sidaana waxay Gunners hogaanka ugu qabatay ciyaarta.
Manchester United ayaa markiiba ka gilgilatay goolka iyada oo gurigeeda joogta looga hormaray, waxayna Man United ku qaadatay inay goolka barbaraha la timaado afar daqiiqo oo kaliya. Wayne Rooney ayaa kooxdiisa daqiiqadii 29 aad u barbareeyay kadib markii uu u dhaliyay gool cajiib ah oo uu madax ku dhaliyay, wuxuuna markiisa ciyaarta u badalay barbaro 1:1 ah. Rooney ayaa goolkan dhaliyay isaga oo duulaya.
Kubbad uu si fiican u soo farsameeyay Angel Di Maria oo uu dhinaca midig ka soo qaaday ayuu Rooney si fiican ugu boos qaaday difaaca Gunners ee Koscielny iyo Mertesacker, wuxuuna kooxdiisa udhaliyay goolka ay u baahnayd. Goolkan ayaa ahaa goolkii sideedaad ee Rooney ka dhaliyo sagaalkii kulan ee ugu danbeeyay ee FA Cupka.
Ciyaarta ayaana markale sii shidantay, Man United ayaa sii waday fursdaha badan ee ay abuuraysay. Rooney iyo Di Maria ayaa ahaa labada ciyaartoy ee ay difaaca Arsenal ka nasan waayeen, waxayna sameeyeen fursado halis ahaa.Cazorla ayuu isaga kubbad laaga xorta ahayd ka badbaadiyay De Gea. Qaybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro 1:1 ah.
Markii laysku soo nastay ee ay koox kastaaba la soo tashatay tababaraheeda isla markaana dardaaran loo soo dhameeyay ayaa layskugu soo laabtay qaybta danbe.Van Gaal ayaa waqtiga nashada sameeyay laba badal wuxuuna ciyaarta ka saaray Ander Herrera isaga oo ku soo badalay Michael Carrick halka uu sidoo kale Luka Shaw ku soo badalay Phil Jones.
Daqiiqadii 50 aad ayay Arsenal dhibaato soo gaadhay kadib markii uu dhaawac muruqa ahi soo gaadhay Oxlade-Chamberlain, waxaana lagu soo badalay Aaron Ramsey. Waxay u muuqatay in Champerlian uu dhaawucu ka soo gaadhay muruqa mawdada bidix.Qaybtii danbe ee ciyaarta ayaa u muuqatay in ay labada kooxoodba taxadar badan samaynayeen, waxayna inta badan ahayd mid aan halis badan lahayn, waxaana ugu halis badnayn.
Laakiin daqiiqadii 61 ayuu markaliya Danny Welbeck indhaha xaday kadib markii uu kooxdiisii hore ee Man United uu ka dhaliyay goolka labaad isla markaana uu kooxdiisa hadda ee Gunners uu hogaanka u dhiibay. Welbeck ayaa Old Trafford ku soo laabtay si uu u ugaadhsado Red Devils, wuxuuna ku ciqaabay qalad xun oo ay sameeyeen Jones iyo Valencia.
Jones oo ciyaarta badal ku soo galay ayaa ku guuldaraystay inuu kantarolo kubbad dheer oo u timid, Valencia ayaana dib ugu furtay goolhaye De Gea , laakiin Welbecka ayaa cirkaga soo dhacay, wuxuuna cidlo diray De Gea halka uu ugu danbayn goolka oo madhan kubbada shabaqa ku hubsaday. Welbeck ayaa si fiican ugu dabaal dagay goolkiisa, wuxuuna beeniyay hadalkii Van Gaal ee ahaa in aanu Welbeck lahayn tayada Man United.Welbeck ayaan intii hore ciyaarta ka dhex muuqan.
Man United ayaa markale hadda dadaal u gashay inay iska soo celiso goolka ay markale Gunners kaga hormartay, waxayna samaysay fursado halis ah iyada oo uu Di Maria ku sigtay inuu goolka barbaraha u keeno. Daqiiqadii 74 aad ayuu David De Gea sameeyay badbaadinta kulankan ugu fiicnayd taas oo ahayd mid heer sare ah kadib markii uu Cazorla kubbad gool loo fishay ku soo tuuray.
Daqiiqadii 76 aad ayuu Man United xaalku ku sii xumaaday kadib markii inta kaadhka labaad ee digniinta ah Di Maria la siiyay haddana kaadhka cas loo taagay.
Di Maria ayaa kaadhka hore lagu siiyay inuu iskuuray halka kaadhka labaad lagu siiyay inuu garsoore Michael Oliver garankiisa jiitay si uu dareenkiisa u soo jeediyo balse isaga oo hore u haystay kaadhka digniinta ah ayuu garsooruhuna kaadhkale oo dingiin ah ugudaray, sidaana ciyaarta looga saaray. 14 kii daqiiqo ee ugu danbaysay ayay Red Devils ku ciyaaraysay 10 ciyaartoy.,halkaan ka daawo dhacadii kaarka casaanka lagu siiyay Di Maria
Daqiiqadii 87 aad ayaa Adnan Januzaj isagana kaadhka digniinta ah lagu siiyay inuu isku dhex tuuray xerada ganaaxa Arsenal si uu ugu guulaysto rekoodhe laakiin garsooraha ciyaarta ee Oliver ayaa markiiba ugu jawaabay kaadh digniin ah iyada oo uu meel fiican u taagnaa isla markaana uu si fiican u arkaayay in aanu Monreal taabanin.
Dhamaadkii ciyaarta ayuu Alexis Sanchez ku sigtay inuu Arsenal udhaliyo goolka saddexaa laakiin markale ayuu De Gea ka hor joogsaday inay Arsenal goolkale la timaado. ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2:1 ay Arsenal guushu ku raacday isla markaana ay ugu soo baxday afar dhamaadka koobka ay difaacanayso ee FA Cupka.